Dnotes စျေး - အွန်လိုင်း NOTE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Dnotes (NOTE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Dnotes (NOTE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Dnotes ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $877 865.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Dnotes တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Dnotes များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DnotesNOTE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0246DnotesNOTE သို့ ယူရိုEUR€0.0208DnotesNOTE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0187DnotesNOTE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0224DnotesNOTE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.219DnotesNOTE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.155DnotesNOTE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.543DnotesNOTE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0915DnotesNOTE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0326DnotesNOTE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0344DnotesNOTE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.543DnotesNOTE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.19DnotesNOTE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.132DnotesNOTE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.84DnotesNOTE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.15DnotesNOTE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0337DnotesNOTE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0376DnotesNOTE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.765DnotesNOTE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.171DnotesNOTE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.62DnotesNOTE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩29.16DnotesNOTE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦9.49DnotesNOTE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.8DnotesNOTE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.672
DnotesNOTE သို့ BitcoinBTC0.000002 DnotesNOTE သို့ EthereumETH0.00006 DnotesNOTE သို့ LitecoinLTC0.000452 DnotesNOTE သို့ DigitalCashDASH0.000271 DnotesNOTE သို့ MoneroXMR0.000276 DnotesNOTE သို့ NxtNXT1.92 DnotesNOTE သို့ Ethereum ClassicETC0.00362 DnotesNOTE သို့ DogecoinDOGE7.09 DnotesNOTE သို့ ZCashZEC0.000298 DnotesNOTE သို့ BitsharesBTS0.757 DnotesNOTE သို့ DigiByteDGB0.786 DnotesNOTE သို့ RippleXRP0.0873 DnotesNOTE သို့ BitcoinDarkBTCD0.000847 DnotesNOTE သို့ PeerCoinPPC0.0815 DnotesNOTE သို့ CraigsCoinCRAIG11.2 DnotesNOTE သို့ BitstakeXBS1.05 DnotesNOTE သို့ PayCoinXPY0.429 DnotesNOTE သို့ ProsperCoinPRC3.08 DnotesNOTE သို့ YbCoinYBC0.00001 DnotesNOTE သို့ DarkKushDANK7.89 DnotesNOTE သို့ GiveCoinGIVE53.24 DnotesNOTE သို့ KoboCoinKOBO5.6 DnotesNOTE သို့ DarkTokenDT0.0226 DnotesNOTE သို့ CETUS CoinCETI70.99
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 13:25:03 +0000.